2009-06-28 ~ ညီနေမင်း ( နည်းပညာ )
Newer, Older and home ​မှာ ​ပုံ​အ​စား​ထိုး​ထည့်​နည်း
​ကျော်​ကျော်: Older post ​လို့ Newer post ​လို့ ​နေ​ရာ​တွေ​မှာ ​မြှား​တွေ ​ဘယ်​လို​ထည့်​သ​လဲ။
* Blogger Dashboard ​ကို ​ဝင်​လိုက်​ပါ...။
* Dashboard ​က​နေ Layout section ​ကို ​သွား​ပါ ..။
* ​ထို​မှ​တ​ဆင့် Edit HTML Subtab ​ကို ​ထပ်​ပြီး Expand Widget Templates ​ကို Check ​ပေး​ပါ...။
* HTML code ​ထဲ​မှာ ctrl +f​ကို​နှိပ်​ပြီး search ​အ​ကူ​အ​ညီ​ဖြင့် ​အောက်​မှ ​ပြ​ထား​တဲ့ ​ကုဒ်​တွေ​ကို​ရှာ​ပါ..။
1. ( Newer Post ​နေ​ရာ​မှာ ​အ​စား​ထိုး​ရန် )
2. ( Older Post ​နေ​ရာ​မှာ ​အ​စား​ထိုး​ရန် )
3. ( Home ​နေ​ရာ​မှာ ​အ​စား​ထိုး​ရန် )
​အ​ထက်​ပါ ​ကုဒ်​တွေ​ကို ​ရှာ​တွေ့​ရင် ​အောက်​မှာ ​ပြ​ထား​သည့်​အ​တိုင်း ​မိ​မိ​ထည့်​ချင်​တဲ့ ​ပုံ URL ​ကို​အ​စား​သွင်း​ပေး​လိုက်​ပါ..။ Home ​နေ​ရာ​မှာ ၂ ​ခု​ရှိ​ပါ​တယ် ။ ၂ ​ခု​စ​လုံး​နေ​ရာ​မှာ ​အ​စား​သွင်း​ပေး​ပါ။
​ခ​ရမ်း​ရောင် ​နဲ့ ​ရေး​ထား​တဲ့ ​နေ​ရာ​မှာ Newer Post ​အ​စား ​ပုံ​ထည့်​ပါ။
​အ​ပြာ​ရောင် ​နဲ့ ​ရေး​ထား​တဲ့ ​နေ​ရာ​မှာ Older Post ​အ​စား ​ပုံ​ထည့်​ပါ။
​အ​နီ​ရောင် ​နဲ့ ​ရေး​ထား​တဲ့ ​နေ​ရာ​မှာ Home ​အ​စား ​ပုံ​ထည့်​ပါ။
<img src="Your Image URL"/> ​ပုံ​လေး​ဖြစ်​အောင် ​ထည့်​ရ​မှာ​ပါ ...
​ပုံ​တွေ​ကို url ​အ​တွက်​တော့ http://www.picoodle.com ​မှာ ​ကို​လို​ချင်​တဲ့​ပုံ​ကို upload ​သွား​တင်​ရ​မှာ​ဖြစ်​ပါ​တယ် .. ​တင်​တတ်​မယ်​လို့​ထင်​ပါ​တယ်
​အောက်​ဆုံး​က direct link ​က url ​ကို ​ယူ​ပြီး​ထည့်​ရ​မှာ​ပါ .. ​ပုံ​တွေ​ကို​တော့ ​ကျွန်​တော်​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ် . ​ကိုယ့်​ဟာ​ကို upload ​လုပ်​ပြီး​တင်​ကြ​ပေါ့ .
​လို​ချင်​ရင် ​အောက်​မှာ ​ဒေါင်း​လိုက်​ပါ ... ​တစ်​ခါ​တည်း​လုပ်​ထား​ပြီး​သား​ပါ ​တင်​ပေး​လိုက်​ပါ​တယ် ..
Local area connetion ​မ​ပေါ်​ရင် ​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​မ​လဲ
​ကွန်​ပျူ​တာ​ကို restart ​ပေး​လိုက်​ပါ .. ​ပ​ထ​မ​ဦး​ဆုံး ​ကွန်​ပျူ​တာ​စ​ဖွင့်​ပြီး ၄ ​စ​က္ကန့်​လောက်​ကြ​တာ​နဲ့ delete key ​ကို​ပဲ ​ဆက်​တိုက်​နှိပ်​ထား​လိုက်​ပါ(​ဆိုက်​တိုက်​ခေါက်​နေ​ပါ) ​ခ​ဏ​နေ​ကျ​ရင် BIOS SETTING ​ပေါ်​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ် (​ဖွင့်​ပြီး​ပြီး​ချင်း​နော် ၄ ​စ​က္ကန့်​နော်)
power management setup ​ကို ​ရွေး​လိုက်​ပါ ​ပြီး​လျှင် ​အောက်​မှာ​ပြ​ထား​တဲ့ Lan ​ကို Disable ​ဖြစ်​နေ​ရင် Enable ​ပြန်​ပြီး​လုပ်​လိုက်​ပါ .. ​အောက်​မှာ​ပုံ​လေး​နဲ့​ပြ​ထား​ပါ​တယ် ... ​အဲ့​လို ​ရေး​ပြီး​တာ​နဲ့
F10 ​ကို​နှိပ်​လိုက်​ပါ .. box ​ပေါ်​လာ​တာ​နဲ့ ​သူ​မေး​တာ​နဲ့ y ​ကို​နှိပ်​လိုက်​ပါ .. ​ပြီး​ရင် enter ​ကို​ခေါက်​လိုက်​ပါ ​ကွန်​ပျူ​တာ restart ​လုပ်​ပါ​လိမ့်​မယ် .. ​ပြီး​တာ​နှင့် lan ​မှာ local area connetion ​ပေါ်​လာ​ပါ​လိမ့်​မယ် .. ​အ​ဆင်​ပြေ​ပါ​စေ​ဗျာ ..
Virus ​မ​ပါ​ပါ ..
​အောင်​အောင်: ​အ​ကို uninstaller ​က ​ကူ​လိုက်​တာ virus ​ပါ​လာ​တယ် ​ဟိ​ဟိ
​ကို​အောင်​အောင်​ရေ ​ကျွန်​တော်​ပေး​တဲ့​အ​ထဲ​မှာ ​ဘာ​ဗိုင်း​ရပ်စ်​မှ ​မ​ပါ​ပါ​ဘူး​ဗျာ .. ​ကျွန်​တော်​တို့​သုံး​နေ​တဲ့ anit virus program ​တွေ​က keygen ​တို့ crack ​တို့​ကို virus ​အ​နေ​နဲ့​ပဲ ​သိ​ကြ​တာ​ပါ .. ​အစ်​ကို​မ​ယုံ​ရင် ​ကြိုက်​တဲ့ crack ​ကြိုက်​တဲ့ keygen ​တွေ​ကို ​စ​တစ်​နဲ့​သယ်​သွား​ပြီး ​ကြိုက်​တဲ့ ​ကွန်​ပျူ​တာ​က antivirus ​နဲ့ ​စစ်​ကြည့်​ပါ .. virus ​လို့​ပဲ ​ပြော​မှာ​ပါ .. ​အဲ့​ဒါ​ကြောင့် ​တစ်​ခါ​တစ်​လေ ​ကျွန်​တော့်​စက်​ထဲ​မှာ virus ​စစ်​တဲ့​အ​ခါ​တွေ​မှာ ​အဲ့​လို​မ​ပါ​သွား​အောင် ​အ​မြဲ​စစ်​နေ​ရ​တာ​ပါ .. ​တစ်​ခါ​တုန်း​က ​အဲ့​လို​စစ်​လိုက်​လို့ remove ​လုပ်​လိုက်​မိ​တာ ​အ​ကုန်​လုံး​ပါ​သွား​ပါ​တယ် ... ​အဲ့​တော့ ​ကျွန်​တော်​တို့​အ​နေ​နဲ့ .. crack ​တို့ keygen ​တို့​ကို ​သုံး​တော့​မယ်​ဆို​ရင် antivirus program ​ကို ​ခ​ဏ​ပိတ်​ထား​ပေး​ရ​ပါ​တယ် .. ​မ​ဟုတ်​ရင် ​သုံး​လို့​မ​ရ​ပါ​ဘူး ... .
Newer, Older and home ​မှာ ​ပုံ​အ​စား​ထိုး​ထည့်​နည...
Local area connetion ​မ​ပေါ်​ရင် ​ဘယ်​လို​လုပ်​ရ​မ​...